“Slalom 2018”: manana tombony Rakotomiarana Tsiory | NewsMada
Hotontosaina, ny 8 sy ny 9 desambra izao eny amin’ny TMF Ivato, ny dingana faha-7 sady farany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, “Slalom”. Fifaninanana karakarain’ny klioba ACCT. Milaza ny fahavononany avokoa ireo mpandray anjara rehetra ary samy hiady ny ho lohany.
Manana tombony Rakotomiarana Tsiory miohatra amin’ireo mpanamory hafa, raha jerena ny isa efa eo am-pelatanany. Manana isa 129 izy amin’izao, taorian’ny dingana enina nifaninanana. Nahazoany fandresena avokoa ny dingana dimy amin’ny enina raha atao ny jety todika. Nanamarika isa ambony hatrany i Tsiory nandritra ireo dingana ireo. Nisantatra ny fandresena rahateo izy tamin’ny “Slalom” voalohany, nokarakarain’ny TMF Rally, nahazoany isa 25. Toy izany koa ny tamin’ny “Slalom” MSA sy FMMSAM ka nahazoany io isa ambony 25 io. Azo lazaina ho mazava, araka izany, ny lalany amin’ny fisalorana ny anarana maha tompondaka amin’ity taona ity.
Laharana faharoa manaraka an’i Tsiory Rasoamaromaka Mika, manana isa 83. Na ambony aza io isany io, ho sarotsarotra ny hanenjika an’i Tsiory noho ny elanelan’isa mifanalavitra. Mbola ny zana-dRasoamaromaka, i Faniry, ihany koa ny eo amin’ny laharana fahatelo, amin’ny filaharana ankapobeny vonjimaika ary manana ny isa 74.
Na efa tazana aza ny fahombiazana ho an’i Tsiory, mbola samy miandrandra fandresena avokoa ireo mpanamory mpandray anjara, amin’ity dingana faha-7 farany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, “Slalom”, ity.
Filaharana ankapobeny, taorian’ny dingana faha-6, “Slalom 2018”
1-Rakotomiarana Tsiory: 129
2-Rasoamaromaka Mika: 83
3-Rasoamaromaka Faniry: 74
4-Rajemison Aro Kiady: 43
5-Rabekoto Adriani: 42
6-Rahamefy Teddy: 27
7-Raharinosy Stenio: 15
8-Rabesaotra Mickael: 10
9-Ramiarijaona Tsitohaina: 8
10-Louvel Mickael: 7